Ny Andro niakaran'ny TOMPO .
Article publié le jeudi 28 avril 2016.
ANDRO NIAKARANA : NY VOKANY HO AN’NY MPINO
Hankalaza an’Andriamanitra noho ny fetin’ny Andro Niakarana (Ascencion) isika mpino afaka andro vitsivitsy. Tsy mety malaza toy ireo fety kristiana hafa ity anankiray ity mandraka ankehitriny. Tena voalazan’ny Soratra Masina anefa ny niakaran’i Jesoa Kristy tany an-danitra (Lio 24 ; Asa 1 ; Rom 8 :34 ; Fil 2 :9s). Ny vokany ho an’ny mpino an’i Jesoa Kristy Izay niakatra ho any an-danitra no ho jerentsika eto.
HO ANY KOA ISIKA
« Handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho...Ho avy indray ka handray anareo ho any Amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa » (Jao 14 :3). Manana programa mazava ny Tompo rehefa niakatra ho any an-danitra, dia ny hanomana ny fandraisana antsika ho any Aminy rahatrizay. Fampaherezana lehibe ho antsika izay mandalo fahasahiranana ety an-tany izany : aretina, fahantrana, asan’ny maizina, famoizampo, sns. Fampitandremana ho antsika izay tsara toerana ety an-tany koa izany : manan-karena, manam-pahaizana, manam-pahefana, sns. Any Aminy sy izay hitoerany no handrasantsika ety an-tany, ka hanaovantsika ny adidy maha mpino mandrapahatongan’izany fotoana izany.
HO TAHAKA AZY
Andriamanitra tonga nofo Izy, maty sy nitsangana tamin’ny maty, ary natao ho Tompo ambony noho ny anarana rehetra (Fil 2 :5-11). Izay lalana nampiakarana Azy tany an-danitra izay dia hodiavintsika ihany koa. Satria Olona voalohany tonga any i Jesoa Kristy (I Tim 2 :5), na dia tena Andriamanitra feno tokoa aza, dia ho any koa isika mpino Azy. Hanana ny tenan’ny any an-danitra isika, ary efa natsangana sahady sy efa any an-danitra aza isika amin’izao ankehitriny izao (Efe 2 :6). Izany hoe, efa miaina ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty isika, ary efa miaina ihany koa ny fanjakan’ny lanitra rahatrizay.
HATAO LANITRA NY TANY
« Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany » (Kol 3 :2). Tsy ny zavatra mirefarefa izay katsahin’ny mponin’ny tany no antom-pisiantsika mpino ety an-tany. Tsy ny hivelona amin’ny fahotana intsony no dikan’izany, fa ny mamantatra izay zavatra ambony ankasitrahan’ny Tompo. Izao fahavelomantsika ankehitriny izao izany, dia mampahita sahady ny mason’ny olombelona mbola mpanota fa, azo atao lanitra ity tany difotry ny fahotana ity. Tsy mpanapotika izao tontolo izao isika, fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra hikatsaka izay hahasoa ny olona sy ny tontolo iainana.
A.	Zaka, Mpitandrina
Vendredi 10 Avril 2020 - 1:04:17